လက်တင်အမေရိကန်တွင် COVID-19 မျိုးရိုးဗီဇကွဲဗိုင်းရပ်စ် “Mu”ကို PAHO က စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေ - Xinhua News Agency
ဗျူရိုအေးရိစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပန်အမေရိကန်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (PAHO) သည် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ဩဂုတ် ၃၀ ရက်တွင် “အထူးဂရုစိုက်ရမည့် မျိုးရိုးဗီဇကွဲ” အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သော နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မျိုးရိုးဗီဇကွဲ Mu ၏ လက်တင်အမေရိက၌ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကို စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။“ကိုလံဘီယာ အမျိုးသား ကျန်းမာရေးအင်စတီကျု့က လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအရ ကိုလံဘီယာနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဒီမျိုးရိုးဗီဇကွဲဗိုင်းရပ်စ်ကို B.1.621 လို့ခေါ်ဆိုပြီး ဇန်နဝါရီလက တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု PAHO ၏ ပေါ်ထွက်လာသော ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများဆိုင်ရာ အကြံပေး Jairo Mendez Rico က စက်တင်ဘာ ၁ ရက် အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
Mu မျိုးရိုးဗီဇကွဲဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုအား ကော်စတာရီကာနိုင်ငံနှင့် အီကွေဒေါနိုင်ငံများတွင် တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ရောဂါပြင်းထန်မှု၊ လူသေဆုံးမှု သို့မဟုတ် ရောဂါကူးစက်မှု သတ်မှတ်ချက်အရ သက်ရောက်မှု ကြီးကြီးမားမားမရှိကြောင်း Mendez က ပြောခဲ့သည်။
WHO က Mu မျိုးရိုးဗီဇကွဲဗိုင်းရပ်စ်အား နိုင်ငံ ၃၉ နိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိထားသော်လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းအောက်ရှိကာ ရောဂါကူးစက်မှုကျဆင်းလျက် ရှိကြောင်း အပတ်စဉ်သတင်းလွှာတွင် ပြောကြားထားသည်။
သို့ရာတွင် အဆိုပါ မျိုးရိုးဗီဇကွဲဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုသည် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံတွင် ၃၉ ရာခိုင်နှုန်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အီကွေဒေါနိုင်ငံတွင် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ရောဂါကူးစက်မှုမှာ တည်ငြိမ်နေသည်ကို ပြသနေကြောင်း Mendez က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“အထူးဂရုစိုက်ရမည့် မျိုးရိုးဗီဇကွဲ” ဟု သတ်မှတ်ရခြင်းမှာ အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်အား “အလွန်နီးကပ်စွာ၊ ထပ်တိုးသက်သေများ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု သို့မဟုတ် ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာအမူအကျင့်တွင် ပြောင်းလဲမှုတစ်စုံတစ်ရာကို အာရုံစိုက်ခြင်း” အတွက် စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုရန် တိုက်တွန်းထားကြောင်း Mendez က ရှင်းပြထားသည်။ (Xinhua)
BUENOS AIRES, Sept. 1 (Xinhua) — The Pan American Health Organization (PAHO) is monitoring the evolution in Latin America of the Mu variant of the novel coronavirus, detected in Colombia and labeled asa“variant of concern” by the World Health Organization (WHO) on Aug. 30.
“Thanks to the strategic monitoring carried out by Colombia’s National Institute of Health, this variant called B.1.621, which has been circulating in Colombia and other countries, was detected in January,” Jairo Mendez Rico, PAHO advisor on emerging viral diseases, said Wednesday duringavirtual press conference.
Cases of the Mu variant have been recorded in Costa Rica and Ecuador, but without major impact in terms of severity, mortality or marked increase in transmission, Mendez said.
In its weekly bulletin, the WHO said the Mu variant had been detected in 39 countries but was declining globally, with predominance in less than 0.1 percent of cases.
However, Mendez noted the variant accounts for 39 percent of cases in Colombia and 13 percent of cases in Ecuador, and showed steady increase.
Labeling ita“variant of concern” calls for monitoring it “very closely, looking for additional evidence and being attentive to any changes in its clinical or epidemiological behavior,” explained Mendez. ■
A vendor wearingaface mask sells vegetables and fruits atamarket in Bogota, Colombia, March 18, 2020.(Photo by Jhon Paz/Xinhua)
သမ္မတရှီက တရုတ်-လက်တင်အမေရိက စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ထိပ်သီးညီလာခံ ဖွင့်လှစ်ခြင်းအား ဂုဏ်ပြုပြောကြား